Home Wararka Maanta XOG: Saraakiishii hogaamineysay ciidankii Bad baado qaran oo xildhibaano laga dhigayo
XOG: Saraakiishii hogaamineysay ciidankii Bad baado qaran oo xildhibaano laga dhigayo
Sanadkaan oo ah Baarlamaanka Soomaaliya mid ciidan xubno soo noqday kusoo biireen ayaa hadana la sugayaa saraakiil kale oo tartan ugu jira inay kuraastooda kusoo baxaan.
Hore General Saadaq John iyo General Yaasiin Fareey ayaa Kuraas ay ku baratameen oo loo sii xiray ku guuleystay sidaasna Xildhibaan ku noqday baarlamaanka 11aad soomaaliya.
General Yuusuf Indha cade iyo saraakiil kalena waxaa lagu wadaa inay tartan galaan maadaama hore ay usii shaaciyeen inay murashaxiin yihiin.
Korneel Cusmaan Xaadoole Gudoomiyihii hore ee degmada Balcad & Korneel Mukhtaar Xasan Tifoow Shaahmacabe oo ah Abaandulaha Guutada 4-aad Qeybta 27-aad ee xoogga dalka ayaa iyaguna sanadkaan murashaxiin xildhibaan ah.
Intaas iyo inkaloo weli soo shaac bixin murashaxnimadooda balse saraakiil ciidan ah ayaa baarlamaanka isku soo taagaya si ay xildhibaanimo unoqdaan.
Saraakiishii qeybta ka aheyd kacdoonka Bad baado qaran ee muddo kororsiga sanadkii hore ka diiday Farmaajo ee hadda xildhibaanimada doontay waxa lagu micneeyey inay kasoo horjeedaan dib usoo laabashada xukunka Farmaajo.
Balse Cali yare,Gudoomiyeyaasha degmooyinka Warta Nabada iyo Dayniile Maxamed Abuukar Jacfar iyo Seynab Xaabsay oo iyaguna xildhibaanimo ku haminaya ayaa golaha shacabka sanadka soo socda waxa uu ka dhigi doonaa haday guuleystaan shakhsiyaadkaan mid weji kale uyeeli doona kalfadhiyada ay yeelan doonaan.
Cida calfan doonta lama oga kuraasta qaar oo weli kor loo hayo sida Kuwa yaalla Galmudug iyo Hirshabelle oo ay adkaan doonto sida loogu kala guuleysto maadaama shakhsiyaad mucaarad iyo muxaafad ahba isha kuwada hayaan.